Warar - Mabaadi'da dhowr ah ee xulashada abrasive hordhac ah
Daxalka birta ah ayaa meel walba yaal, markasta
Si looga hortago wasakhda birta, habka ugu caansan waa in la isticmaalo daahan si loo ilaaliyo dusha sare ee alaabada birta. Dusha sare waa in la nadiifiyaa kahor ilaalinta kahortaga. Boqolaal wax soo saar iyo warshado ay ka mid yihiin maraakiibta, taangiyada keydka, buundooyinka, dhismayaasha birta, saldhigyada korantada, gawaarida, tareennada, qalabka milatariga, aerospace, iwm. Waa in lagu daaweeyaa dusha ka hor inta aan la dahaadhin. Birta xoqan ayaa ah qalabka nadiifinta ugu waxtarka badan.
Nalalka birta ah
Guud ahaan, waxaa jira tuur darbo bir ah (shot steel steel carbon sare iyo shot steel steel yar), birta birta, toogashada birta, birta birta, birta birta ah ee birta la gooyey / toogashada shuruudaysan, birta ahama, silig jarjar bir ah, wasakh bir ah, iwm. Wax-soo-saarka birta ee waxqabadka sare ma fududa in la jabiyo, boodh hooseeya, adeegsi hooseeya, waxtarka nadiifinta oo sarreeya, iyo wax-soo-saarka guud ee wanaagsan Waxay si weyn u yareyn kartaa heerka isticmaalka ee isticmaalaha ugu dambeeya, taas oo yareyneysa kharashyada isla markaana yareynaysa qiiqa.
Haddaba su’aashu waxay tahay, sidee loo xushaa wasaqda birta oo tayo sare leh?
Si loo hubiyo in natiijada daaweynta dusha sare ay si buuxda u gaarsiisan tahay heerka, labada tilmaamayaasha asaasiga ah ee abrasives biraha: nadiifinta waxtarka iyo isticmaalka.
Dhowr ismaandhaaf ah oo ka dhashay xulashada darbooyin bir ah oo la tuuray:
Wareegga biraha la tuuray ma ka roon yahay?
Cabirka walxaha ma ka labis badan yahay, ka fiican yahay?
Muuqaalka dhalaalaya, ayaa ka fiican?
In geeddi-socodka sameynta iyo diyaarinta darbooyin bir ah, birta la shubay ayaa laga qaboojiyaa dareeraha illaa adag, waxayna yaraataa inta lagu gudajiro howlaha qaboojinta. Yaraantan waxaa lagu sameeyaa xaalad bilaash ah, mana jirto wax khatar ah oo la mid ah shubista shubanka oo qayb ahaan lagu kabayo bir dhalaal ah halkaasoo mugga ka dib hoos u dhaca uu hoos u dhacayo, sidaas darteed qaybaha jilicsan ee dusha sare ka muuqda ayaa muuqda. Noocyada noocan ah ayaa soo maray yaraansho ku filan, qaabkuna ma ahan mid wareegsan laakiin qaabdhismeedka ayaa cufan. Si kastaba ha noqotee, haddii tallaalka birta ah ee aan si buuxda qandaraaska u helin, qaab-dhismeedku uusan cufan lahayn, waxaa jira cilladaha gudaha sida hoos-u-dhaca iyo hoos u dhigidda godadka.
Tuurista tamarta E = 1 / 2mv2, haddii qaabdhismeedka uu cufan yahay, isla muggiisuna yahay, tayada cufnaanta weyn ee M waa, tamarta saameynteedu wey weyn tahay, sidoo kalena ma sahlana in la jabiyo. Sidan, sax maahan: biraha wareega ayaa si fiican u toogtay.
Miisaanka hadhuudhka ee biraha la toogtay ma ka labis badan yahay, ka sii fiican yahay?
Aagga nadiifinta, dusha sare ee goobta shaqada in la nadiifiyo ama ku buufinta waxay ka sameysmi doontaa boholo dusha la nadiifiyey. Kaliya marka godadka iyo godadku ay si buuxda isu dul dhacaan, dusha oo dhan si fiican ayaa loo nadiifin karaa.
Isku dheelitirnaanta cabirka walxaha tallaalka birtu waa, muddada dheer ayay qaadataa in la gaaro dhammaystirka iskudhafka godadka.Qalalka birta oo leh saamiga isku darka cabbirka qayb ahaanta, tallaalada biraha waaweyn ee inta badan loo isticmaalo nadiifinta, iyo tallaalada birta yar yar wuxuu nadiifin doonaa inta u dhexeysa aagga lagu daaweeyay xabbado bir ah oo baaxad weyn leh
Xilligan waxaa jira laba nooc oo ah shot steel steel carbon sare: toogashada birta oo hal demin ah iyo toogasho bir ah oo laba laab ah. Way adag tahay in la kala sooco halabuurka, adkaanta, iyo qaab dhismeedka biraha. Si kastaba ha noqotee, tallaalka birta labanlaabmay wuxuu leeyahay firidh wanaagsan iyo nolol daal badan, Midhaha xabbad bir ah oo halbeegsata waa kuwo daran oo nolosha daalkeeduna hooseeyo. dusha sare waa khafiif, waxay umuuqataa mid dhalaalaya; halka biraha la toogtay markii daaweynta labaad la demiyo ， filimka Fe3O4 ee dusha dushiisa ka sii dhumuc weyn, ma iftiiminayo iftiinka, mana u muuqdo mid dhalaalaya. Marka dusha sare ee dhalaalayaa ma cabirayo wax soo saarka wanaagsan, laakiin haddii ay laba laabeyso toogashada birta ah iyo in kale waa arrin ka muhiimsan.